ဟော်မင်နဒီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ပရိုင်းမိတ် မျိုးရင်းတစ်ခုတမ်းပလိတ်:SHORTDESC:ပရိုင်းမိတ် မျိုးရင်းတစ်ခု
ကွဲပြားသော ဟော်မနစ် (hominids) မျိုးစိတ် (၈) ခု (မျိုးစိတ်တစ်ခုလျှင်တစ်တန်းစီ)။ ။ (လူသား၊ ချင်ပန်ဇီမျောက်ဝံ၊ ဂေါ်ရီးလားမျောက်ဝံ နှင့် လူဝံ)
မျိုးရင်းခွဲ (သို့) မျိုးရင်းသေးများ
မဟာမျောက်ဝံ (Great Apes) မျိုးစိတ်များ ပျံ့နှံ့တည်ရှိရာ ဒေသများပြ မြေပုံဖြစ်သည်။ အစိမ်းရောင်ခြယ်ထားသော ဒေသများမှာ လူသားများတည်ရှိရာ ဒေသများဖြစ်သည်။
ဟော်မင်နဒီ (/hɒˈmɪnɪdiː/)သည် မျောက်ဝံကြီး (Great Apes) သို့မဟုတ် ဟော်မနစ် (hominids)တို့ပါဝင်သော ပရိုင်းမိတ်မျိုးရင်းကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မျိုးစုလေးခုရှိပြီး၊ အဆိုပါ မျိုးစု (၄) ခုအောက်တွင် ကွဲပြားသော မျိုးစိတ် (၈) ခုကို တွေ့ရသည်။ လူဝံ မျိုးစု (Pongo) အောက်တွင် ဗော်နီယံ၊ ဆူမတြား နှင့် တာပန်နူးလီ လူဝံ မျိုးစိတ်တို့ပါဝင်သည်။ ဂေါ်ရီးလား မျောက်ဝံ မျိုးစု (Gorilla) အောက်တွင် အရှေ့ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်း ဂေါ်ရီးလား မျိုးစိတ်တို့ပါဝင်သည်။ ချင်ပန်ဇီမျောက်ဝံ မျိုးစု (Pan) အောက်တွင် ချင်ပန်ဇီနှင့် ဘွန်နဘို မျောက်ဝံ မျိုးစိတ်တို့ပါဝင်သည်။ ဟိုမို (Homo)အောက်တွင် လက်ရှိခေတ် လူသား မျိုးစိတ်တစ်ခုသာ ကျန်ရှိသည်။
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 181–184။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
↑ Gray, J. E. (1825). "An outline of an attempt at the disposition of Mammalia into Tribes and Families, withalist of genera apparently appertaining to each Tribe.". Annals of Philosophy 10: 337–334.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟော်မင်နဒီ&oldid=732978" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။